Xasan Sheekh: Masiirka dalka suuq madow ma aha, mana wadi karaan afar ruux oo is jecel… – Hagaag.com
Xasan Sheekh: Masiirka dalka suuq madow ma aha, mana wadi karaan afar ruux oo is jecel…
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kana mid ah midowga musharixiinta dalka ayaa si adag uga jawaabay tallaabadii ay xukuumaddu ku go’aansatay in doorashada la qabanayo iyadoo aysan jirin cid loo joojinayo.
Xasan Sheekh ayaa ku tilmaamay go’aankaas mid khatar ku ah sida uu hadalka u dhiggay midnimada dalka, isaga oo sheegay in aan wax la aqbali karo aheyn in la qabto doorasho hal dhinac oo kaliya ka socta.
”Anagoo ka warsugeyna madaxdii ayey warka aad aragteen soo saareen waa yimaadeen war qaarkiis qadaf ah, waalaga soconaa. dalkan hadda ayuu kala taagan yahay Somaliland ayaa naga maqan oo la raadineyay.. qaar kalena in sabab loo abuuro ay gooni isu taagaan sax maaha, qaddiyada doorshada ee maanta taagan waa hannaan u baahan kalsooni iyo wadar ogol, waxayna ku habooneyn in shir la isugu yimaado oo lagu soo bandhigo ayuu yiri ” Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh ayaa intaa ku darray in marnaba madaxweynaha u socon doonin in dadka qaarna uu yiraahdo waa laga maarmaa kuwa kalana uu ciidan ku daabulo si xoog loogu maquuniyo, isaga oo intaa ku darray in mas’uuliyiintii ka hadashay doorashada aysan dadkoodu ku matalin go’aankaa isaga ah.
”Masiirkan dalka Suuq Madow ma’aha. mana wadi karaan afar ruux oo is jecel, waan tallada dib loo celinayaa mar kalana leysugu yimadaa shir” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh ugu danbeyntii oo ka hadlay ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne iyo meelaha kale ee dalka u qaadanayaan micnahooda in doorashada lagu boobo.